[Wednesday, February 7th, 18] :: Somaliland oo Fatwo ka saartay gudniinka Fircooniga
Hargeysa (RH) Wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland, Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed ayaa soo saaray fatwo uu ku mamnuucayo gudniinka fircooniga oo weli ka jira dhulka Soomaaliya.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in magdhow la siin doonno dhibbanayaasha loo geysto gudninkaas isla markaanna la ciqaabi doonno cid kasta oo la arka iyadoo dhiirigalineysa gudninkaas oo dhib ay ku qabaan dumarka marka ay yar yihiin iyo marka ay hooyo noqdaanba.
Hadalkan ayuu sheegay in iyadoo lixda bisha Febaraayo, sannad walba dunidda loo asteeyay maalinta ka hortagga iyo la dagaallanka gudniinka fircooniga.
Si kastaba, Soomaaliya waxey ka mid tahay waddama gudniinka fircooniga uu dhaqanka ka mid yahay.
XAGEE KASOO JEEDAA GUDNIINKA FIRCOONIGA?
Waxa la sheegaa inuu gudniinkani bilowday waqtigii Faraaciinta Masar, ka dib markii reer Bani-israa’il oo waqtaasi la gumeysan jirey nin faalalow ahi u sheegay boqorki xilligaas inuu talada kala wareegi doono wiil ka dhalan doona dadka ay gumeystaan. dabadeedna uu amar ku bixiyey in la (gudo) oo la tolo dhamaan naagahooda, waxana muhiimadaasi qabanayey Umulisooyin la shaqeenayey boqortooyada, si loo kantaroolo guur-kooda, uurkooda iyo dhalitaankooda, ka dibna wixi wiil ah oo xiligaasi dhasha lagu amri jirey in la dilo.